၂၀၁၃ ပြီလ NAB သတင်းများ | 2017 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2017 » ဧပြီလ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဧပြီလ 2017
ပြကွက်များ၏နောက်ကွယ်အတူတက် Sennheiser အသင်းများဒူဘိုင်းအတွက် Sennheiser အသံအကယ်ဒမီ Host မှ
အဆိုပါပြကွက်များ, တစ်ဦးဦးဆောင်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားနောက်ကွယ်မှအောင်မြင်စွာ Sennheiser အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရုပ်ရှင်ပညာ၏အသံရှုထောင့်အသေးစိတ်တစ်ဦးအလုပ်ရုံတည်ခင်းဧည်သိရသည်။ မိတ်ဖက်စီစဉ်ဒူဘိုင်းစတူဒီယိုစီးတီး, ဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှု, ကွဲပြားမှုနှင့်နည်းပညာစပွန်ဆာ VITEC ၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးလက်ခံရရှိထားတဲ့ငါးရက်ကြာအဖြစ်အပျက်, တက်ရောက်ရန်အဆိုပါအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးဧပြီလရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းအရပ်ဌာနကို ယူ. ...
(In-သင်တန်း) facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2)
ရာထူး: Facility အင်ဂျင်နီယာချုပ် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာချုပ် 2) (In-သင်တန်း) ကုမ္ပဏီ: ဝါရှင်တန်တည်နေရာ၏ပြည်နယ်လွှတ်တော်: Lacey WA ကိုအမေရိကန်ကလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ခြင်းဝါရှင်တန်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်အမြဲစိမ်း Keeping ကျနော်တို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဂေဟဗေဒမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ကခြားနားချက်ရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအလွန်အမင်းထိရောက်သောကြောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်, ပူးပေါင်း ...
ရာထူး: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level) ကုမ္ပဏီ: Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: Quincy IL အမေရိကန်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၌သင်တို့၏အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ Sinclair အသံလွှင့် Group နှင့် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions Sinclair ဆက်သွယ်ရေးအင်အားကြီးအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားများမှာ! ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုမိုစုံလင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ Sinclair ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်, ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရုပ်မြင်သံကြားဘူတာမှန်ဆောင်မှုပေးပါသည် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: AT & T ကတည်နေရာ: Bedminster NJ အမေရိကန် AT & T ကစတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့သောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, လယ်ပြင်ထုတ်လုပ်မှု, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝဘ်သတ္တုများပုံသွန်း၏နေ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖို့နေ့ကိုထောကျပံ့ဖို့ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာတစ်ချက်ချင်းအချိန်ပြည့်စာချုပ်အနေအထားရှိပါတယ်။ အဆိုပါအောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာအနည်းဆုံး5နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကအပိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကသက်ဆိုင်ရာဒီဂရီ (ဆိုလိုသည်မှာ ...
ရာထူး: စျေးကွက်အတိုင်ပင်ခံ (entry-level) ကုမ္ပဏီ: Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: အနောက် Palm Beach တွင်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၌သင်တို့၏အမှတ်အသား Make အမေရိကန် FL ။ Sinclair အသံလွှင့် Group နှင့် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions Sinclair ဆက်သွယ်ရေးအင်အားကြီးအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားများမှာ! ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုမိုစုံလင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ Sinclair ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်, ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှန်ဆောင်မှုပေးပါသည် ...
#NABShow 2017: ကြေညာချက်ပြန်လည်စုစည်းမှု: Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးထုတ်လုပ်မှုစင်တာတွင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် MSG ကွန်ယက် Plan ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ!
အဓိကကြေညာချက် #NABShow 2017 မှာဒီရက်သတ္တပတ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးသူတို့လက်ရှိကစားထွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုစတင်ရန်ခုန် MSG ကွန်ယက်နဲ့အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါ Nexio + amp မီဒီယာအများအပြားနှင့် Versio IOX သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်စားသုံးမိ, သိမ်းဆည်းခြင်း, နှင့် play-ထွက်စစ်ဆင်ရေး၏နယ်ပယ်များတွင် MSG ကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ကိုကူညီပေါင်းအချို့ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းအဘို့အပေးသွားမှာပါ ...
Ericsson က UDN တရုတ်စားသုံးသူတွေမှဝင်ရောက်ခွင့်ချဲ့ထွင်
Ericsson က (NASDAQ: Eric) တရုတ်အင်တာနက်အသွားအလာ 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုသယ်ဆောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ China Telecom နှင့် China Unicom အပါအဝင်အော်ပရေတာ '' ကွန်ရက်များသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၎င်း၏ညျ့ဝ Delivery ကွန်ယက် (UDN) ဖြေရှင်းချက်တိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ UDN network operator များမှ၏နောက်ဆုံးမိုင်လက်လှမ်းမမီနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးဆက်သွယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Delivery ကွန်ယက် (CDN) ဖြစ်ပါသည်။ Tianlai ...
ရာထူး: အသံဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: ချိုင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, Inc မှတည်နေရာ: Chicopee MA အမေရိကန်ကျနော်တို့လက်ရှိအသံ / ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်ပေး Audio / Video အရောင်းအင်ဂျင်နီယာများများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနေသောသော့ချက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးအဖြစ်အရောင်းနှင့်အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြပြီး ကျနော်တို့များကိုနည်းပညာများအတွက်ထောက်ခံသူများ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှင်းလင်းစွာအကျိုးကျေးဇူးများတို့အကြားနဲ့နိုင်သူဖြစ်ရမည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 8712345 » 102030...နောက်ဆုံး»